Barnaamijyo Kale - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-La'aanta
Waxaan la xiriirnaa ururo kala duwan oo ka caawiya isku xirka Oregonan cunto degdeg ah, caafimaad, iyo adeegyo bulsho marka lagu daro shaqadayada SNAP iyo cuntada dugsiga.
Hel Caawiye Cunto
Makhaayadaha Cuntada waa wakaalado qaybin samafal ah oo dadka Oregon siiya cunto iyo badeecooyin loogu talagalay diyaarinta iyo isticmaalka guriga. Ku-siinta cunto isla goobta kuwa u qalma, maqaasiinnada cuntada ayaa ka caawin kara labadaba baahiyaha degdegga ah iyo sahayda joogtada ah ee cuntada si loo kabo xalal waara sida SNAP iyo Cunnada Dugsiga.
KA RAADI MAQAAL CUNTO AH OO AAGAAGAAGA
211- Macluumaadka - Hagaha adeegyada caafimaadka iyo bulshada ee laga heli karo Oregon iyo SW Washington
Mararka qaarkood waxaan u baahanahay wax ka badan cunto. Dhab ahaantii sugnaanshaha cuntadu waxay si aan kala sooc lahayn ugu xidhan tahay arrimaha sida guriyeynta, daryeelka caafimaadka, tababarka shaqada iyo barnaamijyada kale ee ka caawiya dadka Oregon inay ku noolaadaan nolol aan gaajo lahayn.
Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC)
Barnaamijka Nafaqada Dheeraadka ah ee Gaarka ah ee Haweenka, Dhallaanka, iyo Carruurta (WIC) ayaa bixiya agab dheeraad ah si looga hortago gaajada. WIC waxay taageertaa caafimaadka wanaagsan iyo nafaqada haweenka danyarta ah ee uurka leh ama naaska nuujinaya, iyo carruurta da'doodu ka yar tahay shan sano.
RAAD KILIN AMA DUKAANKA WIC